Liverpool Oo Guuldarro Ay Ka Soo Gaartay 10 Xiddig Oo Sevilla Ah Xilli Dhaawac Xun La Gaarsiiyay Xiddig Liverpool Ah - Gool24.Net
Divock Origi ayaa shabaqa soo taabtay iyadoo Liverpool ay guuldarro 2-1 ka soo gaartay kooxda Sevilla laakiin ciyaarta waxaa hareeyay dhaawac halis ah oo soo gaaray da’ yarka Liverpool Yasser Larouc.
18 jirkaan daafaca bidix ayaa garoonka looga qaaday sariirta bukaanka ka dib markii uu xiddiga Sevilla Joris Gnagnon uu ka haraantiyay lafdheerta, waxaana Joris Gnagnon la siiyay casaan toos ah iyadoo ciyaarta ay 15 daqiiqo ka harsan tahay iyadoo kulanka saaxiibtinimo uu isku bedelay dagaal.
Sevilla ayaa hogaanka u qalantay ciyaarta qabatay qeybtii hore imarkii Nolito u kubad dabamariayya Andy Lonergan oo ciyaarayay kulankiisii ugu horeysay, laakiin Origi ayaa barbareeyay daqiiqad ka hor waqtigii nasashada markii uu shabaqa ku taabtay kubad madax aheyd oo ka timid Nathaniel Philips.
Isbedelo badan oo ay sameeyeen labada kooxood qeybtii labaad ayaa ciyaarta jawigeeda wax ka bedeshay iyadoo casaankii Gnangnon uu xaalada sii xumeeyay, laakiin Sevilla oo 10 nin ku ciyaareysa ayaa cadaadis kala kulmeysay Liverpool waxayse heleen gool lama filaan ah dhamaadkii ciyaarta iyadoo Alejandro Pozo uu kubad dabamariyay Simon Mignolet isku daygiisii labaad.
Inkastoo uu kulanka ahaa mid saaxiibtinimo hadana kooxda reer Spain waxay ku ciyaareysay xaamasad gooni ah iyagoo halis gelinayay inay dhaawacyo badan u geystaan da’ yarta Liverpool taasoo ka careysiisay tababare Jurgen Klopp.
Kulanka xiga ee Liverpool ee tartanka International Champions Cp waxa ay Liverpool habeenka Arbacada la dheeli doontaa Sporting Lisbon iyadoo ciyaartaan ay ka dhaceyso garoonka Yankee Stadium ee magaalada New York.